Samsung Galaxy Video Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Video ku Galaxy
Qeybta 1: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Videos ka Samsung Galaxy
Qeybta 2: Sidee si ay u gudbiyaan Videos ka Computer si ay Samsung Phones
Qeybta 3: Transfer Media isticmaalaya Samsung Kies
Marar badan ah, waxaan u baahanahay inuu ka soo kabsado ka videos tirtiray, sawiro iyo sida xijiyaan kale. Waxba ma ahan in haddii ay ku heleen og ama aan garanayn u tirtiray, si ula kac ah ama ula kac aheyn, mar tirtiray, mar dambe ma ay yihiin. Xijiyaan tirtiray aan la arki karo noo oo ay dhacdo waxaan u baahanahay inaan dib u helno, waxa ay u muuqataa arrin shaqo dhibaato, mashquulsan iyo daal. Article waxay tixgelinaysaa seenyada iyo qeexayaa hab aad u fudud in aan soo kabsado kaliya videos iyo sawiro, laakiin sidoo kale xiriiro, fariimaha, Cajalado, waraaqaha iyo wax kasta oo kale, kaas oo deganaa telefoonka gacanta.
Waxaa jira tiro ka mid ah software kabashada laga heli karaa viz internetka. Android Recovery, Total Recovery, iyo soo-kabsashada Zero waseeqeeyay. Wondershare Dr. Fone u Android waa mid ka mid ah doorashooyinka more caanka ah, isagoo kala duwan oo ka mid ah qaababka soo kabashada dhigaya saaxiibtinimo si ay u isticmaalaan. Waxaa loo arkaa sida ugu wanaagsan ee qalab soo kabashada xogta iyo si fiican u la shaqeeya telefoonada Samsung Galaxy. Wondershare Dr. Fone u Android ma aha oo kaliya fududahay in la isticmaalo, laakiin wuxu ballan qaadayaa boqolkiiba boqol gura oo ka mid ah xogta tirtirayaa.
Ka dib markii tallaabooyinka hoose, videos la soo kabsaday karaa qalabka Samsung Galaxy.
• Ka dib marka la rakibo, qalab aad ku xidhi in computer iyo ogolaan Wondershare Dr. Fone u Android si loo ogaado qalab aad.
• Marka qalabka ku xiran oo loo aqoonsaday, waxaad u baahan tahay riix badhanka 'socda' si ay u bilaabaan baaritaan ah.
• Skaanka muujin doonaa xogta ku saabsan qalab aad. Tani waxay qaadan kartaa dhowr daqiiqo, ku xidhan xogta ee qalabka.
• Marka scan la dhammeeyo, ka 'soo kabsado' button rukun xaq hoose (oo hadda naafada ah), in karti loo doonaan
• Tani waa tallaabadii u dambaysay. Marka badhanka ayaa karti, waxaad riixi kartaa waxa on iyo hanaanka soo kabashada ee xogta helay bilaabi lahaa.
Raadinta si ay u gudbiyaan videos ka your computer si aad telefoon Samsung? Halkan waxa aad ku arki sida aad sameyn karto waa, si fudud oo deg deg ah. Your phone Samsung taageeri doonaa qaabab video kala duwan, ay ku xidhan tahay ciyaaryahan video aad isticmaasho. Haddii aad ciyaaryahan VLC Media in aad qalab Samsung, waxaad ka ciyaari kartaa wax ka files .flv in .dat files. Si kastaba ha ahaatee, by default .mp4 waa faylka qaab video taageeray.
Kala beddelashada dhex cable USB
• Mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud si ay u gudbiyaan files u dhexeeya computer iyo telefoonka laga helo cable USB. Connect aad telefoon si computer, iyo in la hubiyo in ay la quful oo waxaa ka shaqeeya sida qalabka warbaahinta.
• Haddii wax walba xaq u tagaa, your computer ogaan doonaan qalab iyo waxaad awoodi doontaa inaad si ay u gudbiyaan files (nuqul / dhimo / xanjo) iyo in qalab aad, u dhaqma sida mid ka mid ah drives of computer.
• In qaar ka mid ah kiisaska, habka kor ku xusan uma shaqeeyo. Tani waxay dhici kartaa sabab u ah cillad ku computer ama in cable USB ama software qalab, nidaamka ma ogaan qalabka iyo halkan kala iibsiga uusan qaadan meel. Si aad uga takhalusi khatartan, waa in loo isticmaalo software Samsung Kies.
Samsung Kies, software loogu talagalay by Samsung si ay kaaga caawiyaan in aad mobile Samsung xidhmi doontaa PC, waa hab sahlan oo waafajinta iyo wareejiyo warbaahinta u dhexeeya qalabka. Waxaa loo isticmaali karaa warbaahinta kala iibsiga ka mid qalab in kale.
• Si aad u soo dejisan, booqo: halkan
• Ka dib marka la rakibo, guji icon muhiim ah orange iyo abuurtaan codsiga.
• Isku qalab Samsung oo isticmaalaya cable USB. Sida ugu dhakhsaha badan aad ku xidhan, waxaad arki lahayd ogeysiin ah: "Connected sida Device Media".
• In ay dhacdo, aadan heli qalab aad ku xiran, weerar dadban ku saabsan screen mobile (top si hoose), si uu u furo guddi gaadhsiin dooro, oo ku xiran sida camera (si ay u gudbiyaan sawiro) ama ku xiran sida qalabka warbaahinta (si ay u gudbiyaan files audio iyo video ).
• In guddiga bidix, guji sawiro ama videos (wax kasta oo aad jeceshahay in aad wareejiso), oo waxaad arki lahayd xogta lagu kaydiyaa qalabka.
• Hubi images / videos aad rabto in lagu wareejiyo oo guji badhanka badbaadiyo. Tani waxay ku weydiin lahaa in aad u caga oo ku dul xulashada goobta, kala iibsiga bilaabi lahaa. Waxaad bilaabi kartaa kala iibsiga ka soo horjeeda si la mid ah oo raac tallaabooyinka la mid ah.
• Riix "My Computer" hogaanka bidix ee Kies in la furo daaqada My Computer, dooro faylasha aad rabto inaad ka dhoofin. Jiid oo hoos u waxyaabaha soo xulay gal midkood Galaxy icon xiran ama suuqa kala Device Browser ah.
Haddii aad raadineyso xal loo dhan-in-ka mid ah iyo inay fursad u helaan astaamaha kala duwan, waxaan idin kula talin lahaa isticmaalaya Wondershare Dr. Fone u Android. Haddii kale, aad u wanaagsan si ay u tagaan la Samsung Kies shaqeeya xunna sidoo.
> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Videos ka Samsung Galaxy